Warbixin: Geerida Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif & Madaxda DF oo ka tacsiyeeysay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Warbixin: Geerida Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif & Madaxda DF oo ka tacsiyeeysay
Allaha u naxarisitee waxaa magaalada Baladwayne ku geeriyooday Ugaas Cabdraxmaan Ugaas Khaliif Ugaas Roobe kadib markii uu wadnaha istaagay, Waxaana la sheegay inuu saaka ka qeybgalayay kulan muhiim ah oo u socday Beeshiisa, waxaana ku soo booday xanuun deg deg ahaa.
Allaha u naxariistee Ugaas C/raxmaan ayaa saddex bilood ka hor waxaa dalka Turkigaga lagag daweeyay xanuun dhinaca wadnaha ah, waxaana lagu xusuusan doonaa doorkii uu ka qeyb qaatay dhinaca nabada iyo dib u heshiisiinta, waxaana uu ahaa aqoonyahan ka baxay Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.
Ugaas Cabdiraxmaan ayaa waxaa Saldanada Ugaasnimo Beesha Xawaadle u caleema saartay sanadkii 2001, kadib markii uu geeriyooday aabihiis Ugaas Khaliif.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray qoyskii, eheladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistee Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif “Innaa Lillaahi wa inaa Ileyhi Raajicuun. Allah u naxariisto marxuumka. Waxaa lagu xusuusan doonaan hawlihii muhiimka ahaa ee uu u hayey bulshada sida nabadeynta iyo dib u heshiisiinta oo uu wadey ilaa ay geerida uga timaaddo. Waxaan Ilaahay uga baryaya naxariistii inuu Jannatul Fardowsa ka waraabiyo, qoyskii , eheladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodayna uu samir iyo iimaan ka siiyo’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif “Alle ha u naxariistee Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif waxa uu ahaa shaqsi waqtigiisa ugu badan galiyay nabadeynta iyo dib u heshiisiinta ummadda, waxa uuna saaka geeriyooday isaga oo ka qeybgalaya shirka Nabadda ee Samadoon” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cumar Cabdirashiid.